သဒ္ဓါလှိုင်း: May 2010
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:30 PM 22 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:50 PM 12 comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာသီဥတု ပူပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ သောက်သုံးရေရှားပါးမှု၊ ရေပြတ်လပ်မှု ပြဿနာကလည်း တစတစနဲ့ တိုးလိုးသာ လာနေတော့တယ်။ ဟိုနားမှာ ရေရှားပါး၊ ဒီနားမှာတော့ ရေပြတ်သွားပြန်ပြီ… ဟိုရွာမှာလည်း ရေတွေ ခန်းကုန်ပြီနဲ့ အဝေးကနေ ကြားနေရ၊ မြင်နေရ တာ တကယ်တော့ စိတ်ထိခိုက်လှပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံမှာ ရေရှားပါးမှု ပြဿနာက အရင်တုန်းက သိပ်မကြားဖူးပေမဲ့ ခုလို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုံးရှုံးလို့၊ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးလာတာနဲ့ အမျှ ရာသီဥတုရဲ့ ဖေါက်လွဲဖေါက်ပြန် ကိုလည်း တနင့်တပိုး ခံစားကြရပြန်ပါတယ်။
တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ အဖြစ်တွေက.. ကန်တွေ ရေခန်းတာ၊ ရေအိုင်တွေ ရေခန်းတာ၊ အဲဒါ တွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ…။
ကျမတို့ဟာ အမိနိုင်ငံနဲ့ ဝေးနေတဲ့ နေရာ တခုမှာ ရောက်နေပေမဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အခက်အခဲတွေကို တတ်နိုင်သရွေ့ ပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင်….
ကျမလည်း မိတ်ဆွေတွေ တချို့နဲ့ တိုင်ပင်ရင်း ရေရှားပါးမှု၊ ရေပြတ်လပ်မှု အတွက် မေးမြန်းစုံစမ်းရင်း လတ်တလော ရေပြတ်လပ်မှု အတွက် ကူညီ ဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ STA အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းပြီး ရေလှူဒါန်း နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော ခံစားနေရတဲ့ ရေပြတ်လပ်မှု ဘေးဒုက္ခဆိုးကြီးနဲ့ သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု တို့အတွက် ရေလှူဒါန်း နိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ..။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:11 PM 14 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:28 PM 10 comments:
ကမ္ဘာ့အမေများနေ့မှာ အမေအတွက် ဘယ်လိုဂုဏ်ပြုစာ ရေးရမလဲလို့ တွေးရင်း… တွေးရင်းနဲ့…
ကျမရဲ့ မတောက်တခေါက် စာရေးသားပုံနဲ့ ကျမအမေရဲ့ မေတ္တာကျေးဇူး အနန္တတွေက ကြီးမားလွန်းမက ကြီးမားပြီး နှိုင်းယှဉ်ဖို့ ခိုင်းနှိုင်းလို့ မရလောက်အောင် များပြားလွန်းမက များပြားနေတာကြောင့် ရေးဖို့ အလွန့်ကို မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေမိပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့လည်း အမေများနေ့မှာ အမေအတွက်လည်း တခုခု ဂုဏ်ယူချင်၊ ဂုဏ်ပြုချင်တာကြောင့်လည်း ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာ အတော့်ကိုပဲ မချင့်မရဲ ဖြစ်နေရပြန်တယ်။
ကျမရဲ့ ရေးသားချက်တွေဟာ အမှန်တကယ်တော့ ဆပ်လို့ မကုန်နိုင်တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကျမအမေရဲ့ မေတ္တာနဲ့စာရင် မြူမှုန်လေး တမှုန်စာလောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်မိတယ်။
ကျမ အမေဟာ သားသမီးတွေ အပေါ်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်လိုပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ကျမတို့ မောင်နှမ တွေကအသိဆုံး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ………. အမေ။
သားသမီးတွေကို ပညာတတ် ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီး ပိုပြီး အပင်ပန်းခံခဲ့တာ တွေကိုလည်း ကျမတို့တွေ အသိဆုံးပါပဲ………. အမေ။
မိသားစု အပေါ်မှာလည်း တကယ့်ကို တာဝန်တွေကျေလွန်းလို့ အများရဲ့ အံ့သြ ချီးမွန်းမှုကိုလည်း ခံရတာ မဆန်းပါဘူး………. အမေ။
ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေ အပေါ်မှာလည်း အခက်အခဲရှိလာရင် စိတ်အား ထက်ထက်သန်သန် နဲ့ ကူညီဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမတို့တွေ အသိဆုံးပါ.......... အမေ။
ညဘက် ညဥ့်နက်အောင် စာကျက်တဲ့ကျမကို မအိပ်မချင်း ဘေးနားကနေ စောင့်ပေးပါတယ်။ တရက်မှာ တနေ့လုံး ပင်ပန်းနေတော့ ကျမဘေးနားမှာ လှဲပြီး စောင်လေးခြုံလို့ စောင့်ပေးနေပါတယ်။ ကျမဘေးနားမှာ ခြင်ဆေးလည်း ထွန်းထားပါတယ်။ ကျမက နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အမေကို ခြင်ကိုက်မှာစိုးလို့ ခြင်ဆေးခွေကို ကျမအမေရဲ့ ဘေးနားကို ကပ်ပြီးထားလိုက်မိပါတယ်။ တော်တော်ကြာတော့ ကျမအမေက အမလေး ပူလိုက်တာဆိုလို့ ကျမ နောက်လှည့်ကြည့်တော့မှ ကျမအမေရဲ့ ဒူးခေါင်းမှာ ခြင်ဆေးကနေ မီးကူး၊ စောင်ကိုလောင်ပြီး ဒူးခေါင်းကိုလောင်နေပါတယ်။ ဒူးခေါင်း ပူတော့မှ သိပါတယ်။ ဒူးခေါင်းနားက စောင်မှာ အပေါက်ကြီး ဖြစ်သွားပြီး အပူလောင်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ နောက်ဆို ခြင်ဆေးကို မထွန်းရဲတော့ပါဘူး။
ကျောင်းအတွက် ထမင်းဗူး အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် အစောကြီး ထချက်၊ မနက်စာ မုန့်စားဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ပေးနေရင်းနဲ့တောင် မအားတဲ့ကြားထဲကနေ ကျမတို့လိမ်းဖို့ သနပ်ခါးကလည်း သွေးပေးပြီးသား ပါ။ ကျမတို့ကတော့ အဆင်သင့် လိမ်းရုံပဲပေါ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ အမေ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းမှန်းကို မသိခဲ့ ရရိုး အမှန်ပါ။
ကျမတို့ အရွယ်ရောက် လာတော့လည်း ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ကျမတို့တွေ အတွက် ပင်ပန်းခဲ့ရပြန်တာပါပဲ။ ခုချိန်ထိလည်း ကျမတို့တွေ အတွက် ဘေးနားကနေ အားလုံးကို လုပ်ကိုင်ပေးနေတုန်း၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနေတုန်းပါ။
သားသမီးတွေ အပေါ် အလွန့်ကို တာဝန်ကျေပွန်သလို ကျမအဖေအပေါ်မှာလည်း အလွန်ကို တာဝန် ကျေပွန်ပြီး ဇနီးကောင်းပီသ ပါတယ်။
ပြီးတော့ ခင်ပွန်း သားသမီးတွေ အပေါ်မှာသာ တာဝန်ကျေပွန်ရုံမက မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ် မှာလည်း အလွန်ကို တာဝန်ကျေပွန်ပါတယ်။ တခါတရံ ကျမတို့တွေက အမေ ပင်ပန်းတာကို ကြည့်ပြီး အားမလို အားမရနဲ့ ပြောမိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျမအမေကတော့ ဆွေမျိုးတွေ အခက်အခဲ တခုခု ဖြစ်လာရင် အမြဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီနေမြဲပဲ။
အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေ အပေါ်မှာလည်း လိုအပ်လာရင် ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။။ ဒါကြောင့်လည်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အ၀ ခံစားရပြန်ပါတယ်။ ကျမတို့တွေက တခါတလေမှာ အမေကို ကြည့်ပြီး ရင်မောရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူများအတွက်ပဲ ပူပန်နေလို့ပါ။။။ သူများက မရှိဘူးလို့ ပြောပြန်ရင်လည်း မရှိရှိတာကို ပေးပြီး ကူညီတတ်မြဲ.. စိတ်ပူပန်မြဲ… ။ ကျမတို့က `မေ´ ဒီလောက်ထိ မပူနေပါနဲ့လို့ ပြောရင်လည်း မရပါဘူး။
အခုတော့ အမေကို စိတ်ချမ်းချမ်း သာသာနဲ့ အပူအပင်ကင်းပြီး နေနိုင်စေဖို့ ကျမအမေကို နှလုံးသားထဲကနေ ဆုတောင်းနေရုံ...
ပြီးတော့ `အမေ´ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား နေထိုင် ဆောင်ရွက် ပြီး အမေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ သမီးကောင်း တယောက် ဖြစ်စေရပါမယ်လို့လည်း ကတိပြုရင်း...
မေလ(၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အမေများနေ့မှာ အမေများအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ စိတ်ချမ်းသာ၍ ချစ်သော သားသမီးများနဲ့ မခွဲမခွါ အတူ နေထိုင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်း လက်ဆယ်ဖြာမိုး ရှီခိုးဦးချ ကန်တော့ပါတယ်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:08 PM 16 comments:
Draw A Line for Covid-19
Kesalahan Audio Mobil
RCSS/SSA ပိုငျ Tai Freedom စာမကျြနှာမှ လူမြှိုးမုနျးတီးမှုဖနျတီးတဲ့ သတငျးအလိမျအညှာတငျပွ